Ny toetran'ny Game of Thrones amin'ny kinova GTA | Famoronana an-tserasera
Toetran'ny Game of Thrones amin'ny kinova GTA
Melisa Perrotta | | mpanakanto, sary, Inspiration
Mpamorona sary frantsay frantsay monina any Tokyo, Mike Wrobler dia namerina namorona ireo mpilalao tamin'ny andian-tantara malaza "Game of Thrones". Tamin'izany fomba izany dia nitady ny hanana toetra mampiavaka ny lalao video Grand Theft Auto toy ny loko voasasa, ny aloka misy marika ary ny paleta miloko tena manokana izy. Etsy ankilany, mila ny fanehoana mahazatra ny toetra amam-panahy tsirairay avy ary miverina miverina amin'ny taona 80 miaraka amin'ny akanjo tena manokana amin'ny fotoana.
Mazava ho azy, ny fomba natolotry ny mpanakanto dia manome fiheverana hafa noho izay ananantsika rehefa mahita ireo mpilalao amin'ny akanjo mahazatra azy ireo isika. Ankehitriny ny tsipìka, dragona ary sabatra dia soloina revolver, sakafo, zavatra ary fitafiana ankehitriny. Ao amin'ny lahatsoratra ho hitanao Fampisehoana toy ny «gangster» izay hahatonga an'i Daenerys ho mpanjakavavin'ny meerkats, Jon Snow dia very sabatra, ary na i Jeoffrey aza dia toa ratsy kokoa noho ny hatramin'izay.
Ny aingam-panahin'i Wrobel dia avy amin'ny toerana maro. Nihalehibe ilay mpanakanto nijery andian-tantara toy ny "The X Files", namaky magazine sarimihetsika mahatsiravina. Izy koa dia naka ny aingam-panahiny tamin'ny fananganana nataony tamin'ny legos fony izy mbola kely.
Ho famaranana, ity tetikasa ity dia efa an-taonany maro mahatonga antsika hieritreritra zavatra hafa mety hitranga rehefa manapa-kevitra momba ny foto-kevitry ny sarimihetsika endri-javatra. Ho nanao ahoana ny andian-dahatsoratra raha toa ka nandray ny fomban'ny lalao video? Fantatray fa mitombo ny isan'ny olon-dehibe mijery karazana andian-tsary. Na izany aza, mijanona eo amin'ny toerana kely mpijery izy ireo. Mandritra androany Ny rindrambaiko famolavolana toetra vaovao sy ny sehatry ny mpilalao dia nitombo ny fahaizany; azo antoka fa ny andian-tantara ankafizin'ny fotoana tato ho ato dia tsy hohadinoina raha toa ka nisarika azy i Wrobel, saingy tsy maintsy ekentsika fa mahafinaritra ny fombany GTA.
7 Robb Stark sy Talisa
Robb Stark sy Talisa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Toetran'ny Game of Thrones amin'ny kinova GTA
Mamorona ny vokatry ny typographic an'ilay sarimihetsika STAR WARS vaovao